मेरो प्रेम विवाह नै हुन्छ, कुरो बुझ्नुभो ? - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
मेरो प्रेम विवाह नै हुन्छ, कुरो बुझ्नुभो ?
अभिनेता सविन श्रेष्ठ अभिनयसँगै आकर्षक ज्यानका कारण पनि धेरैको नजरमा पर्छन् । डेढ दर्जन हाराहारी चलचित्रमा देखिएका अभिनेता श्रेष्ठ आजभोली व्यवसायमा पनि सक्रिय छन् । अभिनय र व्यवसाय सँगसँगै अगाडी वढाएका उनि काठमाण्डौंस्थित कमल पोखरीमा रामजी ज्ञवालीसँग जम्का भेटमा परे र केहि गफगाफ पनि गर्न भ्याए ।
बिहे गर्ने बेला भयो, प्रेमिका घुमाएर मात्रै बस्ने हो ?
हाहाहा..., त्यस्तो होइन ।
बिहे कहिले गर्नुहुन्छ ?
बिहे गरौं र अलिकति फरक खालको जिवन बाचौं भन्ने सो“च त पलाएको छ । तर, अहिले तत्कालै बिहेको योजना बनाएको छैन ।
अनु शाहसँगै लगनगाँठो कस्नुहुन्छ ?
हेर्नुस्, २०७२ सालमा भुकम्प आउँछ भनेर न तपाईले थियो, न मैले, न अरु कसैले । भविष्यको कुरा कसैले केहि ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । तर विहे पक्का हुन्छ ।
अनुसँगै बिहे हुने सम्भाबना कत्तिको छ ?
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । उसैसँग हुन्छ । बिहे पक्का हुन्छ । यस विषयमा खासै तनाब नलिनुस् । मेरो प्रेम बिबाहनै हुन्छ, यति भनेपछि कुरो बुझ्नुभयो ?
केहि समय अघि थाइल्याण्ड जानुभयो, फर्किएकै भोलीपल्ट अनुसँग पोखरा जानुभयो । तपाई उता गएपछि प्रेसमकासँग झगडा भएको र फकाउनकै लागी पोखरा लगेको भन्ने हल्ला सहि हो ?
हाहाहा..., यति धेरै त भएको हैन । म उताबाट फर्किएलगत्तै पोखरा जानुको कारण अर्कै थियो । केहि व्यवसायीक हिसावले पोखरा गएका हौं, मैले अनुलाई फकाउनका लागी पोखरा गएको त हैन । संयोग त के भएको हो भने, उहाँको पनि काम रहेछ, मेरो पनि काम । सँगै जाने र सँगै फर्कने हिसाबले पोखरा गएका थियौं ।
तपाईले अभिनय गरेका धेरै चलचित्र फ्लप भए नी ?
मैले सक्ने गरेको छु । आफ्नो तर्फबाट राम्रो काम गरेको छु । बाकी त निर्माता–निर्देशकको पनि सोच राम्रो चलचित्र निर्माण गरौं भन्ने हुन्छ होला नी, भाग्यमा भनेजस्तो हुन नलेखेपछि मैले के गरौं ? तर पुरै फ्लप भएका हैनन्, केहि मात्रै हुन् ।
तपाईपछि आएका स्टार आधा करोड बुझ्ने हैसियत बनाए, चिन्ता लाग्दैन ?
जे कुराको पनि समय आउँछ । शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय, अमिर लगायतका बलिउडका हस्तीहरुका सवै चलचित्र चलेका छन् ? नेपालमा तपाइले जुन नाम लिनुभयो उनिहरुका पनि सबै चलचित्र चलेका छन् ? म धेरै बोल्दिन, सहि समय आएपछि सवै कुरा राम्रो हुन्छ । तर एउटा कुरा के फिल गरेको छु भने, मैले सहि स्त्रिप्ट र निर्देशक पाउन नसकेकै हो ।
तपाई आफै लगानी गरेको चलचित्र हिरो रिर्टन्स प्रदर्शन हुन सकेननी ?
यो चलचित्रको काम सवै सकिएको छ । अव प्रदर्शनका लागी तयार भैसकेको छ ।
प्रदर्शन मिति सरेको सरै छ, कारण त केहि छ होला नी ?
आन्तरिक केहि गढवढका कारण यसो भएको हो । अब चाँडै प्रदर्शनका लागी तयार भएका छौं । यो सक्ने वित्तीकै म आफै लगानी गरेर निकै भिन्न किसिमको चलचित्र बनाउने सोँच गरेको छु । म आफै पनि आत्तिएको छु । अब आउने प्रोजेक्ट एक्सन जनराको भन्दा अलिकति भिन्न हुनेछ ।
ज्यान त खतरै छ, के खानुहुन्छ ?
हाहाहा.., मैले विहान देखी सा“झसम्म खानपानमा अलिकति वढि ध्यान दिन्छु । बिहान २ घण्टा र साँझ डेढ घण्टा जिम जान्छु । सकेसम्म घरको खाना खाने, माछामासु र अण्डा खाने यस्तै त हो नी ।
चलचित्रका स्टारको पारिश्रमिकको बारेमा बाहिर हल्ला सुनेजस्तै हो या यथार्थ अरु केहि छ ?
नेपाली चलचित्रमा काम गरेर अहिले गज्जबको पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनिसकेको छ । मेरो आफ्नै कुरा गर्नेहो भने सवै पुगेको छ । गाडी किनेको छु । व्यवसाय सुरु गरेको छु । घरपरिवार र मेरो व्यक्तीगत हरेक खर्चहरु चलचित्रवाटै त भएको छ । व्यवसाय त भ्रखरै हो, यसलाई स्थापित नगर्दासम्म कमाई हुन्न ।
एउटा चलचित्रवाट कति पारिश्रमिक लिनुहुन्छ ?
ठेगान हुन्न । कहिलेकाहि कम र कहिलेकाहि बढि पनि हुन्छ ।
सानोमा कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो ?
म अलिकति लगाजु स्वभावको थिए ।
तर, अहिले त हक्की स्वभावको देखिनुहुन्छ त ?
हाहा.., सधै उस्तै कहाँ भईन्छ र ?
कलेज पढ्ने बेला युवतीहरु कत्तिको जिस्काउनुहुन्थ्यो ?
युवती खासै जिस्काइएन । म कहिल्यै युवतीको मामलामा झगडा र लफडामा परेन । बाकी साथीभाईहरुको देखियो, सुनियो ।
प्रकाशित :चैत्र ५, २०७५
अरूबाट प्रभावित भइएला भन्ने डर लाग्छ जेष्ठ १, २०७६